Cuntada: Sida loo hubiyo in aad hubiso boggagaaga inuu ka badbaado weerarrada Hacker
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ayaa ah caqabad korodhsiinaya dadka isticmaala internetka. Themacluumaadka waxaa ka mid ah sawirrada nacfiyada, sawirrada kaararka deynta, xogta dawladda, aqoonsiyada emailka, iyo sirta. Tani waxay tusinaysaaDunida khaniisiinta ayaa haya internetka heer kasta. Newbies kama yara fahmi karto sida blogs ama website-yada loo jabin karo iyada oo aanmacluumaadka kaararka deynta - aziende playground. Si kastaba ha ahaatee, khaniisiinta, waxay doonayaan in ay baddalaan goobaha aan duubnayn xagjirnimada jilicsan ee xariifka ah, kharribidda isticmaalayaasha xasaasiga ah 'macluumaadka adiga oo aan aqoonin. Waxaa intaa dheer, waxay ku falanqeyn karaan xarumaha cusub ee boggaga cusub iyo in ay wax ka qabtaan ama ay burburiyaan xogta muhiimka ah iyoin la isku xakameeyo xaasidnimo xun ama afduubka server-ka.
Waa kuwan tallaabooyin fudud oo ay bixiso Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Dijital ah, waxaad isticmaali kartaa si aad u sii haysatid koodhadhka:
Ugu horreyn, cusbooneysii dhammaan software-kaaga. Qofka mulkiilaha ah waa inuu hubiyaa shey kastasoftware ay isticmaalaan waa ilaa iyo hadda iyadoon loo eegin haddii ay shabakadaha internetka laga abuuray xayiraad ama sameynta bogga DIY ee dhinac saddexaadgalka gundhigga. Bixiyeyaasha CMS sida Joomla iyo WordPress marwalba waxay u shaqeeyaan si ay u sii daayaan updates iyo patches joogto ah, taas oo ka dhigaysa software yarugu nugul cirbadaha. Sidaa darteed, hubi inaad rakibtid cusbooneysiinta oo aad sameysid nuqulkii ugu danbeeyay ee taageera website-kaagii oo dhan.
Marka labaad, abuuro amniga ammaanka bogagga internetka..Sida aad u ordoantivirus ka hor inta aanad internetka ku galin kombiyuutarkaada, waa inaad leedahay nidaam ammaan ah, oo u adeega sida xeeldheerta difaaca ugu horeeya ee boggaagaweerarrada. Tusaale ahaan, Damiinka Shabakadda Webka waa qalab muhiim ah. Waxaa loola jeedaa in la baadho taraafikada oo laga saaro wax kastacodsigii xaasidnimada ah iyo sababta oo ah bixinta ka hortagga weerarrada xooggan ee xoogga leh ee SPAM, irbadaha sirta ah iyo Qorista Qolalka Bogga
Saddexaad, u gudub Qodobka Xawilaadda Qodobka Hoose (Hyper Text Transfer Protocol) (HTTPs). HTTPs waahabka isgaarsiinta ee amniga loo isticmaalo ee lagu wareejiyo waxyaabaha xasaasiga ah ee u dhaxeeya server webka iyo website. Habka ayaa ku daraya SSL(Qalabka Lacageed Lacageed) iyo TLS (Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka) si ay HTTP uga dhigato xogta iyo macluumaadka isticmaalkooda iyo kuwa isticmaala weerarrada jebinta.
Marka xigta, isticmaal ereyada sirta ah oo si joogto ah u beddel. Waxaa jira kororkuwa weerarka gardarrada ah ee xoogga leh kuwaas oo si sax ah u qiyaasaya isticmaale-yaqaannada iyo keydinta furayaasha. Isticmaalka furaha ereyada adag waa sidaas waxtar lehee xaddidaya weerarrada luuqadda iyo xoog-muquuniska. Intaa waxaa dheer, furaha ereyada adag, waa lagama maarmaan u ah admin, database iyo server server.
Ugu dambayntii, samee khadka tooska ah ee maamulka. Khasaaradu waxay helayaan fursadmacluumaadka boggaga internetka iyaga oo isticmaalaya ilaha iyo weerarrada maamulayaasha. Waxay isticmaali karaan qoraallada, kuwaas oo ku sifeynaya dhammaan wicitaanada shabakaddaserver loogu talagalay shuruudaha shuruudaha 'login' ama 'admin,' oo wax u dhimaya amniga goobtaada adoo galaya faylashaas. Sidaa darteed, hubi indooro magacyada fariimaha qoraalka ah ee aan rasmiga ahayn, kuwaas oo kaliya lagu yaqaan kooxdaada horumarinta si loo yareeyo jebinta kartida.
Gebogebada, adduunka oo dhan ammaanka internetka, shabakad kasta waa la jabin karaa. GuulWeerarradu waxay u nugul yihiin xogta milkiilaha marka lagu daro in ay khalkhal galiyaan macluumaadka isticmaalaha. Intaa waxaa dheer, weerarrada waxay keeni karaan Google iyo kuwa kalemakiinadaha raadinta si aad u liis gareyso webkaaga si aad uga fogaato faafinta macluumaadka xun ee webka oo dhan. Had iyo jeer sii wad dhinaca taxadarka.Ku-oogista ugu yaraan saddex talaabo aasaasi ah oo lagu bixiyey qodobkan si looga fogaado inuu bartilmaameed u yahay khayaanadaha.